Sary an-tsary kely nataon'i Claudia Maccecchini misy aingam-panahy | Famoronana an-tserasera
Ny anaranao Claudia Maccechini (Claudym), dia mpanakanto italiana manana ny fahaizany manazava ny sarin'ny kolontsaina pop amin'ny Microdetails. Misy tontolo anaty amin'ny zavatra kely, ary izany no mahatonga azy ho mpankafy zavatra sy lohahevitra vita amin'ny ambaratonga kely.
Tiany antsipiriany kelysaingy matetika izy ireo dia tsy jerena noho ny mason'ilay mijery azy haingana. Nanapa-kevitra ny hamorona thumbnails aloha izy ho fitiavam-panahy, fa izy kosa te hanasa ny olona hitanjozotra amin'ilay sary ary hijery azy ireo. Ireo sary natao dia mifandray amin'ny kolontsaina pop- Lohahevitra malala-tanana izay manolotra lohahevitra mahaliana maro ho an'ny thumbnail.
Ny repertoire-ko dia misy sary avy amin'ny sarimihetsika mahazatra toa "Adin-kintana", "Miverina amin'ny ho avy", "ET", "Tompon'ny peratra", "Harry Potter"sns ... Ny aingam-panahy matetika dia avy amin'ny sarimihetsika izay nojereko tato ho ato. Raha vantany vao hitako ny sary izay manome aingam-panahy ahy, dia manomboka amin'ny fotony pensilihazo aho, ary avy eo mampiasa loko rano mamela ahy hitantana endrika sy boky vitsivitsy. Rehefa avy nifindra tamin'ny pensilihazo miloko mba hamoronana ny antsipiriany farany amin'ny kely indrindra. Matetika mandritra ny adiny 6 na mahery aho vao mahavita sombin-javatra iray.
Ity misy a Gallery miaraka amin'ireo miniature tsara indrindra nataony Claudia maccecchini, Manantena aho fa tianao izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary an-tsary kely nataon'i Claudia Maccecchini nahazo aingam-panahy